प्रथम खोटाङ दिक्तेल महोत्सव प्रचार प्रसारको काठमाडौंमा शुभारम्भ, कसले के– के भने ? - Hamrokhotang
Home समाचार प्रथम खोटाङ दिक्तेल महोत्सव प्रचार प्रसारको काठमाडौंमा शुभारम्भ, कसले के– के भने...
प्रथम खोटाङ दिक्तेल महोत्सव प्रचार प्रसारको काठमाडौंमा शुभारम्भ, कसले के– के भने ?
२०७६ पुष २६, शनिबार १६:१२
काठमाडौं । आगामी २ फागुनदेखि आयोजना हुन लागेको प्रथम खोटाङ दिक्तेल महोत्सव, प्रचार प्रसारको शनिबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गरिएको छ ।
‘प्रथम खोटाङ–दिक्तेल महोत्सव, हामी सबैको उत्सव, आर्थिक समृद्धि आधार, व्यवसाय प्रवर्धनको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ २ फागुनदेखि १२ गतेसम्म महोत्सव आयोजना हुन गइरहेको छ ।
खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा हुने महोत्सवमा एक अर्बको कारोबार गर्ने लक्ष्य छ भने एक लाख भन्दा बढीलाई अवलोकन गराउने आयोजकले जनाएको छ । खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिन राईले खोटाङ आर्थिक, पर्यटकिय, धार्मिक रुपले धेरै सम्भावना बोकेको जिल्ला भएको बताए । उनले संघीयतासँगै सरकारी कार्यालयहरु पालिकास्तरमा बाँडिएसँगै सदरमुकाममा चहल पहल कम भएको र महोत्सवमार्फत व्यापारका साथै कला सँस्कृति, भेषभुषा, सम्पदाका साथै खोटाङलाई सबैतिर चिनाउने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गर्न लागिएको बताए ।
प्रचार प्रसार शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य विशाल भट्टराईले महोत्सव सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै महोत्सव सम्पन्न गर्न अन्तिम दिनसम्म जहाँ गएर जे गर्न पनि आफू तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए । उनले आफूले जिन्दगीभर खोटाङमै बस्ने घोषणा गरेको स्मरण समेत गरे ।
तत्कालिन संविधानसभा सदस्य अर्जुन राईले महोत्सव खोटाङलाई चिनाउने अवसर भएको बताए । उनले हलेसीसम्म पुगेका पर्यटकलाई दिक्तेलसम्म पुर्याउने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए ।
नेकपा खोटाङका नेता कुमार आचार्यले महोत्सव देशभरी र देश बाहिररहेका सबैलाई खोटाङलाई चिनाउने अवसर भएकाले सफल पारेरै छाड्नुपर्ने बताए । उनले महोत्सव सफल पार्न आफू र आफ्नो पार्टीबाट सम्पूर्ण सहयोग हुने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
नेपाली कांग्रेस खोटाङका सभापति नरेश कुमार श्रेष्ठले महोत्सव खोटाङको इज्जतसँग जोडिएको कुरा भएको भन्दै सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्ने बताए । उनले महोत्सव सफल बनाउन आफू जहिल्यै सँगै रहने समेत प्रतिवद्धता जनाए ।
संघीय समाजवादी नेपालका नेता केके राईले महोत्सवलाई राजनीति र कुनै दलको हिसाबले नहेरेर त्यो भन्दा माथि उठेर हेरिनुपर्ने भन्दै महोत्सव सफल पार्न आफ्नो पार्टीबाट सबै सहयोग हुने प्रतिवद्धता जनाए ।
दिक्लेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपमेयर विणादेवी राईले हलेसीसम्म आएका पाहुना तथा पर्यटकलाई दिक्तेलसम्म कसरी पुर्याउने भनेर योजना बनाइरहेको बताइन् । सदरमुकाममा चहल पहल कम भएको भन्दै त्यसका लागि ११ वटा पर्यटकिय क्षेत्र पहिचान गरी काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले सबै मिलेर महोत्सव सफल पार्नुपर्ने बताए ।
खोटाङ सेवा समाजका संयोजक राकेश राईले महोत्सव सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो जिम्मेवारी आयोजक संघको मात्र नभएर सबै खोटाङ र खोटाङेको भएको बताए ।
कलाकार शान्तिराम राईले महोत्सवमा जानका लागि कलाकारहरुको उच्च रुची भएको भन्दै महोत्सव सम्पन्न गर्न कलाकारको तर्फबाट तिब्र तयारी भइरहेको बताए ।
खोटाङ होटल व्यवसायी संघको अध्यक्ष रुद्र गिरीले आम खोटाङबासी आजैदेखि लागि परे २ लाख बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिने बताए ।
खोटाङ यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष गणेश बहादुर शाहीले आफ्नो जन्म थलो खोटाङ नभए पनि खोटाङप्रति जहिल्यै शिर झुकाउने बताए । उनले महोत्सवमा जाने पाहुनाका लागि बसमा विशेष छुटको प्याकेज ल्याउने घोषणा समेत गरे ।